Madaxweyne Trump oo U Hanjabey Madaxweynaha Faransiiska | Baligubadlemedia.com
Madaxweyne Trump oo U Hanjabey Madaxweynaha Faransiiska
July 27, 2019 - Written by admin
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku eedeeyay inuu “doqonnimo” ku kacay markii uu canshuur ku soo rogay dhanka internetka, waxa uuna soo hadalqaaday suuragalnimada inuu canshuur aargoosi ah ku soo rogo khamriga mareykanka.
Mr Trump ayaa Jimcihii waxa uu caradiisa ku soo bandhigay farriin uu soo dhigay bartiisa Twitterka, taas oo uu kaga jawaabayay qorshe Faransiiska uu canshuur ugu soo rogayo shirkadda ballaaran ee Google.
Mas’uuliyiinta Faransiiska ayaa ku doodaya in shirkaddu ay lacag yar ay bixiso amaba maba bixiyaan canshuuraha shirkadaha ay bixiyaan ee dalalka aanay wax saldhig ah ku lahayn.
Maamulka Trump ayaa sheegay in canshuurtu si cadaalad aan ahayn loogu bartilmaameedsaday shirkadaha tiknolojiyadda waa weyn ee Mareykanka.
“Faransiiska waxa uu haatan canshuuro ku soo rogay shirkadahayaga waa weyn ee tiknolojiyadda ee Ameerika. Haddii uu qof canshuur ku soo rogaayo, dalkooda hooyo umbaa ku soo rogi kara, waa Mareykanka ee,” Mr Trump ayaa Twitterka sidaas ku soo qoray.
“Waxaannu dhawaan ku dhawaaqi doonnaa tallaabo wax ku ool ah oo aannu uga jawaabayno doqonnimada Macron. Waxaan marwalba iraahdaa khamriga Mareykanka ayaa ka wanaagsan midka Faransiiska!”
Mar goor dambe arrintaasi wax laga waydiiyay ayuu Mr Trump waxa uu sheegay: “Weligey waxaan jeclaa khamriga Ameerika oo waa uu ka wanaagsan yahay khamriga Faransiiska. Walow aanan khamrigu cabin haddana waxaan jeclahay qaabka ay u yaalaan.”
Mareykanka ayaa ah dalka ugu ballaara ee khamriga laga cabo waana midka ugu weyn ee khamriga loo dhoofiyo, iyadoo Faransiiskuna uu ka mid yahay dalalka khamriga dhoofiya.
Wasiirka Maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire ayaa Jimcihii jawaab bixiyay oo waxa uu sheegay in Faransiisku uu ku dhegannaan doono qorshihiisa canshuurta ee internetka. “Canshuurta la duldhigo howlaha internet-ka waa mid caalami ah oo ah caqabad aynu wadawajahayno,” ayuu yidhi
Madaxweyne Macron iyo Madaxweyne Trump ayaa aroortii hore ee Jimcaha waxa ay ka wadahadleen sida loogu baahan yahay in heshiis caalami ah laga gaaro canshuurta internetka ee shirkadaha tiknolojiyadda ee waa weyn, waxaa sidaasi sheegay xafiiska madaxtooyada ee Faransiiska.
Dowladda Faransiiska ayaa waxa ay ku doodaysaa in shirkadaha waa weyn sida Apple, taas oo xarunteeda dhexe ay ku taal meel ka baxsan dalkaasi, inay wax yar un bixiso amaba aanay canshuurba ka dhiibin alaabaha ay ku gaddo gudaha Faransiiska. In canshuur la saaro waxyaabaha internetka lagu iibiyo ayaa waxaa Khamiistii meelmariyay senate-ka Faransiiska, todobaad kaddib markii uu isla qodobkaas soo meelmariyay aqalka hoose ee Golaha Shacabka.
Shirkadkasta ee internetka ku shaqeysa oo iibisa wax ka badan €750m ($850m; £670m) oo ugu yaraan €25m lagu iibiyay gudaha Faransiiska, waxaa laga qaadi doonaa canshuur taas oo laga soo bilaabi doono bilowgii sanadka 2019 waxaana sanadkan la filayaa in laga helo kharash dhan €400m.
Galinkii hore ee Jimcihii ayuu Madaxweyne Donald Trump waxa uu ka digay in shirkadda tiknolojiyadda ee weyn ee Apple ee Mareykanka in aanan canshuur dhaaf loo sameyn doonin waxyaabaha ay ku sameyso Shiinaha. “Halkan gudaha Mareykanka ku samee, wax canshuur ah lagu saari maayo!” ayuu soo qoray Trump.